चिन्ता नलिनुस दाई म निर्दोष छु, एकदिन……. – Tufan Media News
चिन्ता नलिनुस दाई म निर्दोष छु, एकदिन…….
२ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०८:२२
पल शाहलाई भेट्न विभिन्न ब्यक्तिहरु कारागारमा पुगेका छन् । यसै क्रममा उनका काठमाडौका घरभेटी पनि दोस्रो पटक तनहुँ पुगेका छन् । उनले पललाई भेटेको कुराहरु सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै पलका आमा बुवा र परिवारका सदस्यहरुको बारेमा पनि जानकारी दिएका छन् । उनले पलको आमा बि’रामी भनेर आएको समाचारको खण्डन गरेका छन् ।
उनले अहिले पनि पलले आफुलाई दाई मैले केही गल्ती गरेको छैन म निर्दोश छु भनेर भनेको पनि बताएका छन् । उनले आफ्नो घरमा यति धेरै वर्ष वस्दा पनि कुनै कमजोरी आफुले नदेखेको बताएका छन् । उनले अन्य कुनै ठूलो कारणले पललाई अ’प्ठेरोमा पार्न खोजेको हुनसक्ने पनि बताएका छन् ।
बालेन शाहले काठमाडौंको मेयरमा
आफू मेयर भए काठमाडौंलाई
पर्वमा होली, राजनीतिमा ओली
पल प्रकरणमा पिडित गायिकाको
पल शाह प्रकरणमा पहिलोपटक